Macalinka Lyon oo sheegay in ay u diyaar garoobaan 150% si ay kaga adkaadaan koooxda Barcelona – Gool FM
(Europe) 18 Dis 2018. Macalinka kooxda Olympique Lyon Bruno Génésio ayaa xaqiijiyay in kooxdiisa ay u baahan tahay in ay diyaar u noqoto 150%, si ay isugu dayaan inay ka guuleystaan Barcelona, kulanka wareega 16-ka tartanka Champions League ay labada kooxood ku wada ciyaari doonaan.
Bruno Génésio ayaa carabka ku adkeeyay in Lyon ay heysato awood ku filan si ay u sameyso bandhig weyn ee cajiib ah, isagoo xusay waxa ay ka sameeyeen kulamada heerka group-yada, kadib markii ay guul ka gaareen kooxda Manchester City oo lala bar-bardhigo qaab ciyaareedka Barcelona.
Macalinka kooxda Olympique Lyon oo kasoo muuqday shir jaraa’id kadib marka la sameeyay isku aadka wareega 16-ka tartanka Champions League ayaa ka hadlay waxyaabo badan waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Inaan ka guuleysano kooxda Barcelona, waxay u baahan tahay inaan qabano shaqo aad u adag, isla markaana aan bixino wax walba ee awoodeena ah, waa inaan diyaar u noqonaa 150% si aan shaqo fiican u qabano”.
“Waxaa laga yaabaa inaan diyaarino qorshe aan ku joojineyno Lionel Messi, inkastoo ay adag tahay in sidaas la sameeyo, gaar ahaan xili ay Barcelona heysato ciyaaryahano waa weyn”.
“Barcelona waa koox xoogan oo qibrad badan leh, lakiin waxaan u huri doonaa nafteena”.
Ramos oo beeniyay in Real Madrid ay saameyn ku yeelatay bixitaanka Ronaldo iyo Zidane